Maxaa ka Jira in Al-Shabaab ay la wareegeen degaano ka tirsan gobolka Sanaag | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxaa ka Jira in Al-Shabaab ay la wareegeen degaano ka tirsan gobolka...
Maxaa ka Jira in Al-Shabaab ay la wareegeen degaano ka tirsan gobolka Sanaag
Warar dheerad ah ayaa waxa laga helayaa in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay markii ugu horreeysay Awood maamul ku yeesheen degaano ka tirsan gobolka Sanaag, isla markaana Xubno ka tirsan ay degaannadaas la wareegeen.
Warar ay ku daabaceen Baraha ay ku leeyihiin internet-ka ayaa waxaa ay ku shaaciyeen inay la wareegeen deegaannada kala ah Mirici, Masha-caleed, Xabaasha Aw-Cali iyo Markeet. Deegaanadaan ayaa ku yaalla duleedyada degmada Laasqoray ee Gobolka Sanaag.
Maleeshiyaadka Alshabab ayaa Magaalada laasoray ee gobolka Sanaag iyo tuulooyinka hoostaga waxaa dhowr jeer ku dagaalamay oo gacan ku heyntooda isku heystan Ciidamo ka kala tirsan Puntland & Soomaaliland balse ay haatan sheegteen inay la wareegeen Maleeshiyaadka Nabad diidka Al-Shabaab.
Dhinaca kale ilaa iyo hadda ma jiraan wax war ah oo ka Soo baxay dhanka Dowlad Goboledka puntland oo ku aadan Sheegashada Alshabab ee ah in ay qabsadeyn deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag .
Maqaal horeKu dhawaad 20 ruux oo ku geeriyootay qarax ka dhacay dalka Afghanistan
Maqaal XigaMeydka Gabar yar oo Maalintii Labaad yaala Isbitaalka Boosaaso
Koox Hubeysan oo Caawa dil ka Geestay Kismaayo
Ra’isul wasaare Rooble oo amar dul dhigay Golaha Wasiirada